I-Apple iphinde ivelise uxinzelelo koorhulumente, ngeli xesha ku-Putin | IPhone iindaba
I-Apple yaphinda yavelisa uxinzelelo koorhulumente, ngeli xesha ivela kuPutin
Ngaphandle kweengxoxo ezenziwa ngamanye amaxesha yiApple ngenxa yentshukumo eyenziwayo xa urhulumente esenza into isicelo, ngakumbi amaTshayina, kufanele kukhunjulwe ukuba uTim Cook uyintloko kodwa ayinguye onokwenza izigqibo zokugqibela ukuba ichaphazele inkampaniYiyo loo nto ibhodi yabalawuli eyenzelwe yona.
Isicelo seMephu zeApple, xa sisetyenziswa sisuka eRashiya, siqale bonisa usingasiqithi weCrimea njengenxalenye yommandla waseRussia. Izixeko iSimferopol kunye neSevastopol zivela njengenxalenye yeRussia kuzo zombini iinkonzo zokuhamba kunye nezemozulu ngokwe-AFP xa zisetyenziswa kwizixhobo zeApple.
Nangona kunjalo, xa ungena kwinkonzo ye-Apple Maps kulo naliphi na ilizwe, ICrimea isengeyonxalenye yommandla waseRussia. U-Apple akalwenzanga olu tshintsho unilaterally njengoko kusengqiqweni, kodwa uphendule, kwakhona, kwisicelo sikarhulumente waseRussia.
UVasili Piskarev, Usihlalo wekomiti yase-Russia yezokhuseleko kunye nokulwa urhwaphilizo, ukuxele oko U-Apple wenze zonke iinkonzo zakhe ukuba zithobele umthetho waseRussia, umthetho owamkela iCrimea njengenxalenye yommandla wayo, ukulungisa impazamo abayivezileyo.
Isizathu sokuba iCrimea iboniswe kuphela njengenxalenye yommandla waseRussia eRashiya kungenxa yokuba bobabini urhulumente wase-Ukraine kunye namazwe amaninzi asentshona, ithathwa njengekho mthethweni ireferendamu apho isihlomelo saseRussia savotelwa khona.
Akumangalisi ukuba urhulumente waseUkraine uvakalise ukungoneliseki kwakhe sisigqibo sika-Apple, ngomphathiswa wezangaphandle, uVadym Prystaiko, othi okwangoku bakwimeko efanayo ne-Apple. ukuba emva kweminyaka emininzi yokusebenza nzima kakhulu, zonke izimvo zakho ziyabiwa ngaphandle kwesiphumo.
Iifowuni ziimveliso ezilungileyo. Ngokubalulekileyo, nangona kunjalo, @Apile, nceda, nceda, ncamathela kubugcisa obuphezulu kunye nokuzonwabisa. Ipolitiki yomhlaba wonke ayililo icala lakho eliqinileyo. #CrimeaIsUkraine
-Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) Novemba 27, 2019
UPrystaiko umema kwenye i-tweet, ukuba I-Apple inikezelwe kwitekhnoloji, leyo yeyona nto uyazi kakuhle ukuba ungayenza njani kwaye unqabe kwezopolitiko, into ngokucacileyo ongenakuyenza njengoko inokukuchaphazela ngokwasezimalini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » I-Apple yaphinda yavelisa uxinzelelo koorhulumente, ngeli xesha ivela kuPutin
I-ETNews incokola malunga ne-iPhone encinci ye-5,4 "kunye ne-6,7"